Samsung Galaxy S7 iyo S7 Edge casriga taraq - Rule News
Samsung Galaxy S7 iyo S7 Edge casriga taraq
Rafaa South Korean mobile soo bandhigaya-dhamaadka sare telefoonada cusub Android la booska card taageere microSD jecel, kamaradaha super-degdeg ah iyo batariyo weyn
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Samsung Galaxy S7 iyo S7 Edge casriga flagship biyuhu bilaabay at MWC” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Sunday 21 February 2016 18.00 UTC
Samsung ayaa soo bandhigay dambeeyay casriga ah ee ay flagship Galaxy S7, dib loo soo celiyo muuqaalada jecel sida ay ujeedadiisu tahay in la xiro soo-dhamaadka sare ee suuqa Android.
The casriga cusub Galaxy S7 iyo Galaxy S7 Edge Android, soo bandhigay in Barcelona ee Mobile World Congress, dhiso on design ee sannadkii hore versions caan qod6 laakiin dar xireyaashaba IP68 iyo booska card microSD a – laba sifooyinka shirkadda Korean uu noqday caan ku ah ilaa 2015.
Galaxy S7 waxay leedahay screen 5.1in guri laakiin galaas qalooca dhabarka, isagoo intaa ku daray in ergonomics ah. The ballaaran Galaxy S7 Edge ayaa screen 5.5in la geesba midig gacantiisa bidix iyo cidhifyada oo uu leeyahay bezels yar labada dhinac ee shaashadda waxa ka mid ah phablets ugu cidhiidhi ah laga heli karaa samaynta.
The casriga cusub leeyihiin booska card microSD kaydinta fideysa a, wax telefoonada Samsung lahaa ilaa sanadkii la soo dhaafay. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Waxay labada ordi version ugu dambeeyay ee Android 6.0 Marshmallow, leeyihiin 4GB Raam for multitasking hagaagtay iyo 30% Processor oo awood badan leh "gogoshana kaamerada" technology biyo-qaboojinta si looga fogaado in kulayl dheeraad ah telefoonada.
Labada casriga ah sidoo kale waxay leeyihiin baytariyo si weyn u weyn, ay ballankaas si looga fogaado baahida loo qabo in si joogto ah u noqon in search of dhibic awood. Shirkadda ayaa sidoo kale ku riday qalabka si ay u caawiyaan awoodda batariga halka ciyaaraha badbaadiyo, in sidoo kale u ogolaadaan isticmaalayaasha inay qabsadaan footage of fadhiyada ciyaaraha ay la mid yihiin habka ugu isagana Console awood.
Samsung Galaxy S7 ayaa ah had iyo jeer-on feature bandhigay, in bandhigayaa markii ugu, taariikhda ama macluumaad kale oo kooban shaashadda waqtiyada oo dhan. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Samsung waxa kale oo riixaya goob had-soo bandhigay in uu isticmaalaa bandhigay AMOLED screen ee Iftiin graphic yar oo muujinaya wakhtiga, taariikhda ama macluumaadka kale ee user-configurable. Shirkadda ayaa sheegtay in feature baabbi'in doonaa in ka yar 1% batari saacaddii.
Telefoonadan ayaa sidoo kale waxay leeyihiin cusub a, slimmer camera 12-megapixel loogu talagalay la sawir yar oo iftiin ku hay. Waxa uu isticmaalaa pixels 1.4um weyn iyo gelis la f-stop of 1.7 si aynu 25% iftiin badan galay shidma, iyo sidoo kale habka ah autofocus si dhakhso ah, si ay uga caawiso ka hortagga photos ku taalay ama cawlan.
camera ayaa haatan kaliya ulo baxay 0.46mm ka dambe ee telefoonka. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Samsung, saaraha ee dunida casriga ah ee ugu weyn, waxaa xiran oo dagaal ah ka gaartay codadka sabayn ee iibsada smartphone la Apple inta badan suuqyada horumariyo.
Shirkadda waxaa sharad ku batari, xireyaashaba iyo camera uqaadineed in sasabtaan iibsada, iyadoo isku dayaysa in ay ballaariso hannaanka weyn agagaarka casriga ah ee.
Samsung Galaxy S7 Edge ay shaashadda qalooca. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Rory O'Neill, oo madax ka ah brand iyo suuq-saarka, waayo, Samsung ayaa sheegay in: "The suuqa smartphone UK ayaa qaan. kuwii hoos 25 hadda dooran smartphone a la saarayo ay la dhexgalo adeegyada iyo qalabka kale. Waxaan leenahay in ka badan oo kaliya ay soo saaraan smartphone a sameeyo, waxaan ku khasbannahay in xadaynta waxa phone a samayn karo. "
Qayb ka mid ah riix in uu noqon doono Samsung ee Internet of Waxyaabaha SmartThings nidaamka loo yaqaan, oo lagu daray xidhiidh la telefishanka ee shirkadda, nidaamyada audio guriga, kaamirooyinka iyo headset xaqiiqada dalwaddii sameeyey oo shuraako la ah Facebook ee Oculus Rift.
Samsung ayaa sidoo kale sheegay in loogu talo galay in la keeno nidaamka mobile phone contactless lacagaha hadda la heli karo ee Maraykanka iyo South Korea, Samsung Pay, lix suuqyada ka badan 2016, oo ay ku jiraan UK, Spain, Australia, Brazil, China iyo Singapore.
Gear ayaa 360 waa cusub camera 360-degree Samsung ee, awood u toogtay video iyo sawiro la isticmaalayo laba lenses kalluunka-il iyo laba dareemayaal 15-megapixel. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Samsung ayaa sidoo kale bilaabay camera 360-degree ah, Gear ah 360, taas oo u ekaan kubada yar yar oo kaliya ka weyn kubada golf a. Waxay leedahay laba lenses Kalluunka isha 180-degree, lagu hago karo by phone Samsung iyo qulquli karo video ama 30-megapixel photos in waqtiga dhabta ah.
Dib u eegis Samsung Galaxy qod6 Edge: gooladaha raaxo loogu talagalay, ma shaqayn
Samsung Galaxy qod6 Edge + dib u eegis: ka curvy 'iPhone 6 dilaaga More '
36761	5 Android, Qodobka, Telefoonada Mobile, Mobile World Congress, News, Samsung, Samuel Gibbs, Telefonada casriga ah, Technology
← Time Perfect The Year of inay Samee 10 Iibsasho Big [MENTALFLOSS] Information hidda oo inaga caawin karta Fahmaan nololeed Khatarta for Disease →